ခေါင်းစီး- လူမှုရေးအရ | မြှင့်တင်ရန် သင်၏ Podcast အတွက် Audiograms များတည်ဆောက်ပါ။ Martech Zone
ခေါင်းစီး- လူမှုရေးအရ မြှင့်တင်ရန်အတွက် သင်၏ Podcast အတွက် Audiograms များတည်ဆောက်ပါ။
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 9, 2021 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 9, 2021 Douglas Karr
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပေါ့တ်ကာစ်လုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်။ ကုမ္ပဏီများကို စတင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သော ပေါ့တ်ကာစ်စီးရီးအပေါ် မယုံနိုင်လောက်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး - အများအပြားသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခြားရွေးချယ်စရာများ မရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ထိပ်တန်းရာခိုင်နှုန်းသို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်။ Podcasting သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အံ့ဖွယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်-
အသံ - သင့်အလားအလာနှင့် ဖောက်သည်များအား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကာ သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သိလာနိုင်သည့် ရင်းနှီးမှုနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။
လက်ရှိထားခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အောင်မြင်မှုရရှိရန် ကူညီပေးလိုပါသည်... ထို့ကြောင့် သင့်ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသိပညာပေးရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အသံအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့် အောင်မြင်မှုရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သက်သေခံချက် – ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း မကြာခဏ ပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ဇာတ်လမ်းများကို မကြာခဏ မျှဝေလေ့မရှိပါ။ ဖောက်သည်တစ်ဦးကို အင်တာဗျူးခြင်းသည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အသိအမြင်နှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသိအမြင် - သင့် podcast တွင် သြဇာရှိသူများနှင့် လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည် သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပူးတွဲမြှင့်တင်ရန်နှင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်နေသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေး – ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ပေါ့တ်ကာစ်အတွက် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များစွာကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား အနာဂတ်တွင် ဖောက်သည်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာ အရောင်းအ၀ယ်ကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ မယုံနိုင်လောက်စရာ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... နဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ ပေါ့တ်ကာစ်တင်ခြင်းသည် အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ အသံသွင်းခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ နိဒါန်းများ / outros ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ hosting၊ စုစည်းခြင်း... တို့မှ အားလုံးကို အားစိုက်ထုတ်ပါသည်။ မျှဝေပြီးပါပြီ။ ပြည့်စုံသောဆောင်းပါး အရင်တုန်းက ဒီအပေါ်မှာ။ ပြီးတော့… မင်းရဲ့ ပေါ့တ်ကာစ်ကို လွှင့်တင်ပြီးရင် အဲဒါကို ကြော်ငြာဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရာမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါ။ အော်ဒီဂရမ်.
Audiogram ဆိုတာ ဘာလဲ
အော်ဒီယိုဂရမ်ဆိုသည်မှာ အသံဖိုင်တစ်ခုမှ အသံလှိုင်းကို အမြင်အာရုံဖမ်းယူသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Y-axis သည် decibels ဖြင့်တိုင်းတာထားသော amplitude ကိုကိုယ်စားပြုပြီး X-axis သည် hertz ဖြင့်တိုင်းတာသော frequency ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ အော်ဒီယိုဂရမ်သည် သင့်အသံကို ဂရပ်ဖစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်သည် YouTube ကဲ့သို့ ဗီဒီယိုချန်နယ်တစ်ခုတွင် သင့် podcast ကို ကြော်ငြာနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို Twitter ကဲ့သို့ လူမှုရေးချန်နယ်တစ်ခုတွင် မြှုပ်နှံထားနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
လူမှုကွန်ရက်ဗီဒီယိုသည် စာသားနှင့် ရုပ်ပုံပါ၀င်သည့် အကြောင်းအရာများ ပေါင်းစပ်ထားသည်ထက် မျှဝေမှု 1200% ပိုမိုရရှိစေသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ လူမှုရေးနဲ့ ဗီဒီယိုချန်နယ်တွေမှာ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းတွေမှာ တိုက်ရိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပေါ့တ်ကာစ်ထုတ်ဝေမှုမျိုး မရှိတာကို အံ့သြမိပါတယ်… ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပကိရိယာများကဲ့သို့သော ပြင်ပကိရိယာများကို အားကိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းစီးသတင်း.
Headliner- Podcast တစ်ခုကို မျှဝေနိုင်သော ဗီဒီယိုများအဖြစ် မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။
Headliner သည် သင်၏ ပေါ့တ်ကာစ်အတွက် မျှဝေနိုင်သော ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် အော်ဒီယိုဂရမ်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အကြောင်းအရာတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲသည့် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အလိုအလျောက် ပေါ့တ်ကာစ်ဗီဒီယိုများတူးလ်တွင် ပေါ့တ်ကာစ် ပရိုမိုရှင်းဗီဒီယို နမူနာများပါရှိပြီး Headliner မိုဘိုင်းအက်ပ်မှ သင့် podcast အတွက် အသံဂရမ်များကိုပင် ဖန်တီးနိုင်သည်။
Waveforms - လူအများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို လျင်မြန်စွာရယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အံသြဖွယ်အသံမြင်ယောင်မှုတစ်ခုဖြင့် ပေါ့တ်ကာစ်အသံကို ဖွင့်ပေးကြောင်း ၎င်းတို့အား အသိပေးပါ။
ဗီဒီယိုအကန့်အသတ်မရှိ - ဆိုရှယ်မီဒီယာချန်နယ်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ဗီဒီယိုများစွာဖြင့် သင့် podcast ကို ကြော်ငြာပါ။
အပိုင်းအပြည့်အစုံ - သင်၏ ပေါ့တ်ကာစ် အပိုင်း တစ်ခုလုံး (2 နာရီ အများဆုံး) ကို YouTube သို့ လွှင့်တင်ပြီး ပရိသတ်အသစ်များကို ချိတ်ဆက်ပါ။
အသံကူးယူ - ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် သင့်ဗီဒီယိုများသို့ စာတန်းများထည့်ရန် အသံဖိုင်ကို အလိုအလျောက် ကူးယူဖော်ပြပါ။
ဗီဒီယိုကိုကူးယူမှတ်တမ်းတင် - ခေါင်းစီးသည် ဗီဒီယိုမှ စာသားမှတ်တမ်းကိုလည်း ရေးနိုင်သည်။ သင့်တွင် အကြောင်းအရာများရှိပါက၊ စာတန်းများထည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။
အသံညှပ် - ဆိုရှယ်ချန်နယ်တစ်ခုစီအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော သင်၏ ပေါ့တ်ကာစ်အသံ၏ကလစ်များကို ရွေးချယ်ပါ။
အရွယ်အစားမျိုးစုံ - လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုစီနှင့် အခြားတစ်ခုစီအတွက် အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားဖြင့် သင့်ဗီဒီယိုများကို တင်ပို့ပါ။
1080p တင်ပို့ခြင်း။ - ကြီးမားသော၊ သေးငယ်သောဖန်သားပြင်များတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဗီဒီယိုအပြည့်ဖြင့် ကြည့်ကောင်းသည်။
စာသားအန်နီမေးရှင်း - သင့်ဗီဒီယိုများတွင် ပိုမြင်သာသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများကို ထည့်သွင်းရန် စာသားကာတွန်းများစွာထဲမှ ရွေးချယ်ပါ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပါ။
မီဒီယာအမျိုးအစားအားလုံး - ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များ၊ နောက်ထပ်အသံဖိုင်များ၊ GIF များနှင့် အခြားအရာများကို မည်သည့်ပရောဂျက်တွင်မဆို ထည့်ပါ။
ထည့်သွင်းထားသော ဝစ်ဂျက် - မိနစ်ပိုင်းအတွင်း၊ သင့်ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများကို ခေါင်းကြီးဗီဒီယိုများ အမြန်ဖန်တီးရန် နည်းလမ်းကို ခွင့်ပြုပါ။
တစ်ခုတည်း Sign-On - လုပ်ငန်းသုံးအိမ်ရှင်များအတွက် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ သင့် CMS သို့ ဗီဒီယိုများအတွက် ချောမွေ့သောအကောင့်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် စင့်ခ်လုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
Integrated - Acast၊ Castos၊ SoundUp၊ Pinecast၊ blubrry၊ Libsyn၊ Descript၊ Fireside၊ Podigee၊ Stationist၊ Podiant၊ Casted၊ LaunchpadOne၊ Futuri၊ Podlink၊ Audioboom၊ Rivet၊ Podcastpage၊ Entercom နှင့် အခြားအရာများ။
ဤသည်မှာ YouTube တွင် လွှင့်တင်ထားသော Headliner Podcast ၏ Audiogram ၏ ကောင်းမွန်သော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးမှာ၊ သင်နှင့်အတူစတင်နိုင်သည်။ ခေါင်းစီးသတင်း အလကား!
Headliner အတွက် စာရင်းသွင်းပါ။
ထုတ်ဖော်ချက်- ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ရည်ညွှန်းလင့်ခ်ကို အသုံးပြုနေပါသည်။ ခေါင်းစီးသတင်း သင်စာရင်းသွင်းပါက အခမဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်သည့်နေရာတွင်
Tags: 1080pတကယျအသံညှပ်အသံကူးယူနိုင်သည်အော်ဒီယိုအော်ဒီဂရမ်ကဗျာသွန်းCastosဖော်ပြချက်တောFuturiခေါင်းစီးဘယ်လိုLaunchpadOneသီရိPinecastပေါ့တ်ကာစ်ဝစ်ဂျက်ပေါ့တ်ကာစ်စာမျက်နှာခေါင်းလောင်းPodigeePodlinkRivetအသံမြှင့်အားလပ်ချိန်စာရေးဆရာစာသားကာတွန်းဗွီဒီယိုကူးယူခြင်းwaveformအော်ဒီယိုဂရမ်ဆိုတာ ဘာလဲ။youtube က